Bogagga lagu sameeyo lacag-bixinta khadka tooska ah, ma waxaad raadineysaa koronto-dhaliye wax siinaya? | War gadget
Ma waxaad raadineysaa bog lagu sameeyo wax bixinta? Weligaa ma rabtay inaad socodsiiso wax lacag bixin ah oo aadan gacanta ku haysan waraaqo yar yar? Tani iyo dhowr xaaladood oo kale ayaa nagu dhici kara daqiiqad kasta, kuwan "waraaqaha yar" oo ah waxyaalaha lagama maarmaanka u ah meesha aan dhigeyno magacyada dadka kala duwan ee ka qeyb geli kara tartanka si aan ugu guuleysano abaalmarin.
Kiiska noocan ah waxaan kugula talineynaa inaad adeegsato codsi websaydh xiiso leh, oo leh magaca Flucky iyo kan halkii aad ka heli lahayd qoraallo yar yar oo dheg dheg ah, waxaad isticmaali doontaa astaamo yar oo midabbo leh halkaas oo aan ku qori doono magaca kaqeybgalayaasha isku aadka. Ugudambeyn waa a koronto-dhaliye kaas oo aan ku samayn karno magac si fudud oo dhaqso leh.
1 Sida loo abaabulo barbaraha khadka tooska ah ee loo yaqaan 'roulette' ee Flucky
1.1 Sidee iyo sababta loo sameeyo magac bixinta
2 Bogagga lagu sameeyo wax bixinta
2.1 Barbaro 2
2.3 U tuur nasiib
Sida loo abaabulo barbaraha khadka tooska ah ee loo yaqaan 'roulette' ee Flucky
Marka hore waa inaad u jiheysataa dhanka Websaydhka rasmiga ah ee Flucky, kaa helaya marka ugu horeysa oo leh interface gebi ahaanba nadiif ah. Dhinaca midig ee kore ee daaqadda biraawsarka waxaad ka heli doontaa sameecad yar, oo waad aamusiin kartaa haddii miyuusigga asalka ahi ku adkeeyo. Astaantan agteeda waxaa ku yaal mid kale oo yar oo qaab ah «i», kaas oo isku dayaya inuu bixiyo xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan sida ay tahay inaad ugu shaqeyso qalabkan yar, wax aan loo baahnayn maadaama aan daryeelayno waqtigan. .
Qeybta hoose ee shaashadda soo dhaweynta waxaa ku yaal badhan yar oo oranaya «Start«, Taas oo ay tahay inaad riixdo si ciyaarta ay markiiba ugu bilaabato isla markaana halkaas.
Adigoo riixaya badhankan yar, isugeynta Flucky ee daaqada biraawsarka waxyar ayey iska beddelaysaa, maadaama dhinac dhinac ah si toos ah loogu dari doono dhinaca bidix. Halkaas waxaad ka heli doontaa beer yar oo ay ku jirto farriinta «Kudar Qof» (in kasta oo af Ingiriisi ah) ay weheliso badhan cas oo leh "+" calaamadda. Halkan waa inaad gashaa magaca mid kasta oo kaqeybgalayaasha ah ka dibna riix furaha "Gali" ama si fudud u xulo badhanka guduudan (oo leh "+" calaamadda)
Isla markiiba magaca aad dhigtay ayaa ka soo muuqan doona salka isla isla dhinackan laakiin midab gaar ah leh. Dhinaca midig, bedelkeeda, goobaabin ayaa soo muuqan doonta, taas oo run ahaantii imaanaysa roulette yar dalwaddii. Waad ku dari kartaa magacyo badan inta aad rabto baarka dhanka bidix, waxay kuxirantahay tirada kaqeybgalayaasha kaqeybqaadan doona isku aadkaan kumbuyuutarka casriga ah.
Ka soo qaad inaad ku dartay qiyaastii 10 magac, dhammaantood waxay u muuqan doonaan bidixda bidix oo leh midab gaar ah; dhanka midig bedelkeeda (wareegtada) roulette ayaa u muuqan doona 10 qaybood, mid kasta oo midab kale leh. Qeybtaan ciyaarta waa mid aad u fudud in la garto, maadaama midab kasta oo laga helo giraangiraha uu lahaan doono magac walba oo ku yaal dhinaca bidix.
Marka aan qeexno magacyada kaqeybgalayaasha oo dhan, hadda waxaan kaliya dooran doonaa badhanka hoose ee oranaya «Go«, Marka baarka leh magacyada ayaa si dhaqsi leh u baabi'i doona. Waqtigaas gacanta ayaa soo muuqan doonta oo isku dayi doonta inay wareegto giraangirahan.
Sidii aan uga horreyneyno roulette dhab ah, waa inaan sugnaa midkan farsamada leh ee ka tirsan shirkadda Flucky si aan ugu joogsanno midab gaar ah; markay tani ka dhacdo bartamaha daaqadda magaca guuleystaha ayaa soo muuqan doona, isku mid ayaa ka tirsanaan doona midabka halka uu ku istaagay roulettekaan.
Flucky waa barnaamij xiise leh oo websaydh ah oo aan u isticmaali karno xilliyada firaaqada asxaabta iyo qoyska, innagoo karti u siin karna nooc kasta oo shay aan gacanta ku hayno iyo xitaa ka dhig roulettekan mid go'aaminaya cida fulin doonta nooc ka mid ah toobada. Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in codsigan shabakadani uu ku xiran yahay oo keliya shabakadda internetka, waxaan ku wadi karnaa nooc kasta oo madal ah, taas oo ah, Windows, Linux ama Mac.
Sidee iyo sababta loo sameeyo magac bixinta
Waqtiga la qabanayo qamaarka, waxay kuxirantahay muhiimadiisa, waxay u egtahay in waxa ugu fiican ee aan sameyn karno ay tahay inaan u adeegsano codsi ama adeegga websaydhka oo noo ogolaanaya inaan ku fulino qaanso noocan ah si aan kala sooc lahayn adoon u baahnayn waraaqaha sanduuq ay ku jiraan magacyada kaqeybgalayaasha iyo awooda qareenka la kulmaan qaar kale oo ka mid ah tongo.
Bixinta waxeey noqotay aalad aad uwanaagsan markaan rabno isku sheegno shabakadaha bulshada, gaar ahaan markaan hada abuurnay ganacsi oo aan dooneyno inaan bilowno dhameystirka macaamiisheenna. Intaa waxaa sii dheer, aragtida ka dhexeysa kuwa raacsan ayaa sii kordheysa markaan fulineyno qashin, maaddaama mid ka mid ah shuruudaha ugu dhow ee qasabka ah ee ay tahay inaan ku darno ay tahay in lagu wadaago dhammaan shabakadaha bulshada ee isticmaalaha si shirkadeena ama ganacsigeennu u gaaraan tirada ugu badan ee dadka suurtagal ah
Nasiib wanaag internetka waxaan ka heli karnaa tiro badan oo codsiyo iyo adeegyo noo ogolaanaya inaan qabano. Qaanuunka guud, hawlgalka dhammaantood waa mid aad u fudud, maadaama ay kuxirantahay nooca aan doorano, kaliya waa inaan qor magacyada dhammaan dadka ku lugta leh si loo bilaabo isku aadka.
Bogagga lagu sameeyo wax bixinta
Barbaro 2 waxay noo ogolaaneysaa inaan galno tirada kaqeybgalayaasha qeyb ka noqon doona isku aadka oo ay weheliso tirada abaalmarinta aan dooneyno inaan qabanno. Tusaale ahaan, haddii aan dooneyno inaan ku kala qaadno saddex abaalmarin 10 qof, codsigu wuxuu na tusayaa oo keliya magacyada saddexda qof ee kaliya ee nasiibka u yeeshay inay ku guuleystaan. Karaa la wadaag natiijooyinka adoo adeegsanaya Facebook, WhatsApp ama ku daabac boggayaga adoo adeegsanaya lambarka HTML ee na siinaya natiijooyinka. Nooca noocan ah waa lacag la'aan. Haddii aan dooneyno inaan ku siino daahfurnaanta isku aadka, Sortea2 sidoo kale waxay na siineysaa xulashadaas oo ah 2,99 euro.
Websaydhkani waa kan bixiya fursadaha ugu fiican uguna fursadaha badan marka ay timaaddo qabashada raffles. Gudaha Randorium waxaan ku ordi karnaa xaaqmooyinka qashinka boostada, liiska kaqeybgalayaasha, kooxaha ama tirooyin kala duwan. Mid kasta oo ka mid ah raffaladu wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku darno sawir si aan u gaaryeelayno, tirada kaqeybgalayaasha, tirada ugu yar ee kaqeybgalayaasha iyo tirada qiimaha ee loo qeybin doono. Waa inaan sidoo kale ku darnaa sharaxaadda ugu badan ee 400 xaraf oo ah waxa aan qashin-qaadno oo ay weheliso saldhigyada isku midka ah iyo taariikhda ay dhici doonto.
Waxaan sidoo kale sameyn karnaa maalinta iyo waqtiga la qaban doono isku aadka. Marka aan ku darno dhammaan xogta u dhiganta isku aadka aan sameyn doonno, dhagsii daabaca isku aadka. Boggu wuxuu na tusayaa lambar HTML ah oo lagu daro boggeena. Waxaan sidoo kale awoodnaa la wadaag iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada si dadku uga qayb galaan.
U tuur nasiib
Boggan wuxuu noo ogolaanayaa inaan fulino qaanso fudud, oo leh magacyada kaqeybgalayaasha, abaabulno tartan abaalmarino ah, tuur qadaadiic si loo arko cidda guuleysatay, qaadasho kaar, duub laadhuu ... ayaa na siisa U tuur nasiib, waxaan xaqiijin karnaa inay tahay mid gaar ah, inta udhaxeysa kaqeybgalayaasha hor yaala kumbuyuutarka ama ok ku dheji boggayaga facebook. In kasta oo ay run tahay in xulashooyinka lagu fulinayo raafku ay aad u kala duwan yihiin, labadaba sharraxaadda iyo natiijooyinka ay na siiso aad ayey isugu dhow yihiin.
Qalabkani waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran ee aan ka heli karno internetka, maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan abuurno tartamo fiidiyowyo, sawirro, sheekooyin iyo sidoo kale noo oggolaanaya ku dar iyaga on Twitter, Facebook iyo Vimeo kuwa kale. Socitaltools Waa lacag la'aan haddii aadan haysan in ka badan 300 oo raacsan, sidaa darteed waa aaladda ugu fiican haddii aan dooneyno inaan sumadeena u sheegno oo aan helno tiro badan oo raacsan.
Agorapulse waa aaladda ugu fiican ee aan ka heli karno dhiirrigelinta adeegsiga shabakadaha bulshada iyada oo loo marayo abuurista raffles iyo tartamo. Adeegani wuxuu na siiyaa tirakoob waqtiga dhabta ah marka lagu daro noo ogolaanshaha inaan la wadaagno natiijooyinka waqtiga dhabta ah barbaro isku mid ah si aan u hubino saameynta ay leeyihiin marwalba. Hawlaha laga heli karo qabashada qashin-qaadka ee Facebook iyo Twitter waxay leeyihiin qiimayaal aad u jaban, sidaa darteed waxaan bilaabi karnaa adeegsiga iyada oo aan la maalgelin lacag aad u tiro badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Koronto-dhaliye wax sii
Runtii waan ka helay, waa waxa aan raadinayo, laakiin markaan siiyo RESTART wax walba waa la tirtiraa waana inaan ka soo billaabaa meel hoose, ma sii wadi karo ciyaarista ... Talo bixin kasta ma jirtaa? ama roulette si aad u soo dejiso ama u hirgeliso koodh? Mahadsanid!
Jawaab ku bixi Marcos Chourio
Waan ku raacsanahay faallooyinkii hore. Ilaa iyo inta qof uusan caddeyn, wuxuu leeyahay HAL ISTICMAAL KELIYA. Kadib riixida Dib u bilaabida ayaa wax walba nadiifinaysa oo dib u bilaabaysa Nasiib darro in aysan siinaynin xulashooyin dheeri ah.
meesha ay ku qoran tahay "share" waa inaad nuqul ka sameysaa url oo dhan oo aad ku dhajiso biraawsarka waxayna u muuqan doontaa sida ay tahay, si loo bilaabo bixinta cusub, guusha
Waad salaaman tahay, waxaan rabaa inaan ogaado tirada ugu badan ee kaqeybgalayaasha Fluky ay taageerto. Waxaan sameyn doonaa lacag bixin Facebook ah mana ogi inta qof ee ka qeybqaadan doonta. Mahadsanid